❣️Indawo Yokuhlala Enothando-PrivateSunset Pool@ megananda - I-Airbnb
❣️Indawo Yokuhlala Enothando-PrivateSunset Pool@ megananda
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Mega
U-Mega Ungumbungazi ovelele
Ingabe ukhathele futhi ukhathele ukuhlaliswa wedwa nokulangazelela indawo entsha nesimo esisha sokuqeda nje izinsuku ezimbalwa, iviki noma inyanga? i-megananda inempendulo, I-villa yethu yendawo yokubhukuda yangasese inendawo yokubhukuda eyisimanga ye-Sunset Private Infinity ebheke ekubukeni kwelayisi eliluhlaza, Inhlanganisela ephelele yokunethezeka kokuphila kwesimanjemanje kanye nokuphila okuhlaba umxhwele kwefilosofi yobuciko base-Bali, Inikezelwe kulowo ojabulela isikhathi sekhwalithi futhi othanda ukuxuba nemvelo.
Le ndawo yokubhukuda eyenzelwe izivakashi kuphela iyingqayizivele, ungabona indawo yokubuka ilayisi & indawo yakho yokubhukuda eyenzelwe izivakashi kuphela ukusuka ekamelweni lakho elivulekile, le villa isendaweni ethi “Ace” eseduze nezindawo eziningi okumelwe zivakashelwe eduze ne-Ubd yenza kube lula ukufinyelela kuyo yonke indawo.
4.94 · 297 okushiwo abanye
Sihlala edolobhaneni labalimi, lapho wonke ama-villa/ umlimi emukela kakhulu futhi enobungane kukwenza uzizwe sengathi usekhaya kusukela emizuzwini yokuqala ufika.
UMega Ungumbungazi ovelele